2018 मा कसरी ब्याकलिङ्कहरू हेर्नेछन्?
को रूप मा खोज इन्जिनहरु लाई लगातार आफ्नो रैंकिंग एल्गोरिदम को बदलन र नयाँ रैंकिंग अपडेट प्रदान गर्छन, धेरै वेबमास्टरहरु लाई आश्चर्य छ कि उनि dofollow backlinks, या नहीं. पछिल्लो Google पेंगुइन र पांडा अपडेटको लाइटमा, 2018 मा वेबसाईट मालिकहरूले इनबाउण्ड लिङ्कको शक्तिबारे केही शङ्काहरू छन्।. यो लेख ब्याकलिङ्कको शक्तिको बारेमा सबै गलत धारणाहरू हटाउन डिजाइन गरिएको छ र तपाईंलाई यो र आगामी वर्षमा गुणवत्ता ब्याकलिङ्कहरू कसरी बनाउने भनेर सिकाउनको लागि डिजाइन गरियो।.
खोज इन्जिनहरूको आँखामा ब्याकलिङ्कहरू
खोज ईन्जिन ईतिहासको धेरै सुरुवात पछि, ब्याकलिङ्कहरू उनको एल्गोरिदमको अभिन्न भाग भएको छ. सबैभन्दा पहिला, उनीहरूले नयाँ सामग्री खोज्न र कागजातको अख्तियारको गणना गरे. तथापि, पहिलोमा, Google ले स्रोतहरूको गुणस्तरमा ध्यान नदिने मात्र ब्याकलिङ्कहरूको संख्यालाई मूल्याङ्कन गर्यो. थप सन्दर्भहरू एक वेब स्रोत प्राप्त गरेको छ, उच्च यसको खोज इन्जिन खोजको हुनेछ. हाल, ब्याकलिंकहरू नयाँ वा अद्यावधिक गरिएको सामग्रीको साथसाथै क्रलिंगको प्राथमिकताको खोजी गर्न प्रयोग गरिन्छ.
सबै स्प्याम गतिविधिहरू र खोजी इन्जिन नियम उल्लङ्घन गर्न Google ले वेबमास्टर दिशानिर्देशहरू स्थापना गरेको छ जुन सर्वोत्तम लिङ्क निर्माण प्रविधिहरू समेत थिए।. यी नियमहरू समय समयमा धेरै परिवर्तन भएन. अझै पनि, कुनै पनि वेबमास्टर गतिविधिहरू साइट को रेटिङ हेरफेर गर्ने उद्देश्यले गुगल गम्भीर दण्डको साथ दण्डित गर्न योग्य छन्.
खोज इञ्जिन अप्टिमाइजेशनको विकासको साथ, अधिक से अधिक व्यवसायहरू ब्याकलिङ्कहरू प्राप्त गर्ने विभिन्न तरिकाहरू खोजिरहेका थिए।. वेबमास्टर्सले Google SERP मा उच्च स्थिति प्राप्त गर्न छोटो जीत खोज्ने प्रयास गर्यो. नतिजाको रूपमा, वेबसाइटहरू जुन उच्च स्तरमा प्राप्त गर्न योग्य थिएनन् Google गुगलमास्टर दिशानिर्देश उल्लङ्घन गरेर संलग्न Google गुगल पदहरू. यसले डिजिटल बजारमा ठूलो लिंक बिक्री र खरीद अभियानको सुरुवात गर्यो. नतिजाको रूपमा, खोज इञ्जिन अप्टिमाइजेशन उद्योगले केहि प्रभावकारी लिङ्क इमारत प्रविधिहरू नष्ट गरेको छ, जस्तै अतिथि पोस्टिङ, प्रेस विज्ञप्ति, लेख विपणन, ब्लग टिप्पणीहरू, सोशल मिडिया पोष्टहरू, फोरम पोष्टहरू, आदि।.
हाल, Google लाई अझै पनि साइटको मालिक द्वारा छुट्याउनको लागि ब्याकलिङ्कहरू लाई आवश्यक पर्दछ वा पेजरङ्क पास गर्नुपर्दैन।.
2012 मा, Google ले यसको पेंगुइन एल्गोरिथ्म स्थापना गर्यो, जसको अनुसार सबै स्प्यामी ब्याकलिंकहरू भक्त भएका थिए र वेबसाइटहरू जुन सिर्जना गरे उनीहरूलाई सजाय दिइयो।. एउटै वर्ष Google ले Google Search Console मा असक्षम उपकरण सिर्जना गर्यो वेबसाईट मालिकहरूलाई एक क्लिकमा उनीहरूको खराब गुणस्तर स्प्यामी लिंकहरू हटाउन सक्षम गर्न।.
तपाईँले शुरुवातबाट देख्न सक्नुहुने छ, Google को दृष्टिकोण अवलोकन गरिएको लिङ्क निर्माण गर्न इन्जिनियरिङमा रैंकिंग बढ्नबाट बचाउनको लागि गरिएको छ।. धेरै अपरिचित वेबमास्टर्सले यस नीतिलाई गलत तरिकाले व्याख्या गरेका छन्, र यस नीतिबाट "लिङ्क दण्ड" को रूपमा "Google ले लिङ्क इमारत वा लिङ्क बिल्डिंगको विरुद्धमा" को रूपमा लिने लगानीको लायक छैन ". चीजहरू क्रमबद्ध गर्न, Google ब्याकलिङ्कहरू विरुद्ध होइन. यसको विपरीत, गुगलले अर्को 200 मानदण्डहरूको लागि ब्याङ्कलिङ्कको स्तर निर्धारण मापदण्डको रूपमा प्रयोग गर्दछ. तथापि, गुगल प्रयोगकर्ता खोज खोज अनुभव सुधार गर्न कडा मेहनत गर्दै हुनुहुन्छ. यही कारणले गर्दा Google ले रैंकिंग हेरफेर विरुद्ध खोज्ने मात्र खोजी मूल्यवान वेबसाईटहरु लाई उनीहरूको प्रश्न सामग्रीसँग प्रासंगिक विरूद्ध संघर्ष गर्दछ Source .